Injineer Giriig Ah 168 Maalmood Lagu Haystay JABUUTI Oo Dib Dalkiisii Ugu Noqday – somalilandtoday.com
Injineer Giriig Ah 168 Maalmood Lagu Haystay JABUUTI Oo Dib Dalkiisii Ugu Noqday
(SLT-Jabuuti)-George Bougioukas, waxa uu ahaa Injineerka koowaad ee markabka Ptolemaios (Ptolemy), waxa uu dalkiisii hooyo ee Greece uu ku noqday maalintii Sabtidii kadib markii lagu haystay 168 maalmood dalka Djibouti oo ka mid ah dalalka Qaarada Afrika, sida ay qorayso warbaahinta the Greekreporter.com.
Wasiirka Dekedaha ee dalka Giriiga, Giannis Plakiotakis ayaa u diray sawirka Injineer Bougioukas oo haysta baasaaboorkiisa, gabadh uu dhalay, kadib markii uu dib ugu soo noqday dalkiisa.
Qabsashada Injineerkan ayaa bilabtay bishii Sebtember 15, 2019, kadib markii markab xamuul ah oo siday alaab Cargo ah ay la wareegeen ama ay qabteen masuuliyiinta maxalliga, waxaana lagu haystay meel saddex mayl ka baxsan dekeda Djibouti.
Waxaanay masuuliyiintu sheegeen in milkiilaha Giriiga ee markabkaas ay lacag ku leeyihiin.
Si kastaba ha ahaatee warka wanaagsan ee siidaynta Bougioukas, ayaanay wehelin ama aan la sii dayn seddexda badmaax oo kale oo saarnaa markabka Gariiga ka yimid ee Ptolemaios, kuwaas oo weli ku sii jira gacanta Jabuuti.